Ukuchithwa kwemali-ye-NJ & NY yearhente yeZindlu, uKhetho, ukuKhuselwa koDliwano-ndlebe kunye namaGqwetha asebambisayo
ikhaya / Blog / Ukuchithwa
Ngamana 30, 2019 UkuchithwaUshiye uluvoUDerek Soltis
Ixabisa malini ifayile yokubhanga? Kwaye, ngaba ukubhengezwa njengamabhanki kuyawatshabalalisa amanqaku am etyala?
Molo, igama lam nguDerek Soltis. Ndiligqwetha apha kwii-ofisi zomthetho zePatel, Soltis & Cardenas.
Yonke imihla ndifumana ezimbini ...
Iingcebiso ze-3 zokuSombulula ngokulula iiNgxelo zeMali mboleko emva kokubhengeza
Matshi 11, 2019 Ukuchithwa, Ukuqokelelwa kwamatyalaUshiye uluvoSubhan Tariq
Sombulula iMicimbi yokuNgqinisisa ngetyala emva kokubhengezwa
Ngaba ujonga indlela yokulinganisa imiqobo elandelayo emva kokufumana ilahleko yokuhlawula amatyala eNew York ngokusombulula imicimbi yokunika ingxelo ngetyala?
<! - / wp: umhlathi ...
Ukuqokelelwa koThunyelo lwamatyala aMva kokubanjwa kwamatyala eNew York naseNew York
Matshi 10, 2019 Ukuchithwa, Ukuqokelelwa kwamatyala, Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew YorkUshiye uluvoSubhan Tariq
Cela igqwetha ukuba liyeke ukuqokelela iifayile zokukhutshwa kubhengezo olungafunekiyo ukucima iifowuni zokuqokelela ezingafunekiyo.
Ukubhengezwa njengoncedo olusebenzayo kwimicimbi yamatyala akho
Disemba 4, 2018 UkuchithwaUshiye uluvoNguJohn Anderson
Uninzi lwabantu lujamelana nengxaki yemali ngaxa lithile ebomini babo. Nokuba le ntlekele ibangelwe yimicimbi yosapho okanye yobungcali, ibonakala ingxamile kuPayi. Ngayiphi na imeko, imeko yakho yezemali akufuneki ukuba isuke kububi uye ...
Ndingayifumana ilayisensi yam yokuqhuba ukuba ndicofa ngokurhweba?
Oktobha 17, 2018 UkuchithwaUshiye uluvoUDerek Soltis
Ungayibuyisa ilayisensi yakho yokuqhuba ukuba ubhengeza nokuba yisahluko se-7 okanye kwisahluko 13
Ukucekeceka kweSears kuchaphazela njani wonke umntu?
Oktobha 16, 2018 UkuchithwaUshiye uluvoUDerek Soltis
Ijaji ebhuqayo yamkela i- $ 300 yezigidi zeMali kwiZimali zeSars
Ungayilwa kanjani ukubonakaliswa kwakho kweNew Jersey ukubangaba kukho ukophulwa kweNyaniso ye-Federal kuMthetho obolekayo. (TILA Ukwaphula umthetho)
Septemba 27, 2018 Ukuchithwa, Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew YorkUshiye uluvoAndres Cardenas
Ukuphulwa kweTILA Kudityaniswa neSahluko 13 Bankruptcy kunokukunciphisa oko uhlawula iBhanki yakho
Inyaniso kuMthetho oMbolekayo (i-TILA) ifuna "ukubhengezwa okunentsingiselo ngemibandela yokuthenga ngetyala" ngento yakho ebolekwe ngumbolekisi wakho njengomnini khaya ...
Nxibelelana negqwetha laseNew Jersey lokuGxothwa kwemali kwi973-200-1111-Ixabisa malini ifayile yokuBhengezwa njengongenamali e-New Jersey
Septemba 26, 2018 UkuchithwaUshiye uluvoUDerek Soltis
Yimalini ekuya kuhlawula kwiFayile yokuBhengezwa kwi-NJ?
Wonke umntu ocwangcisa ukufayilisha ngenxa yokubhanga kufuneka aqonde ukuba iyakubiza malini. Ukubhengezwa kuza ngexesha apho imali kunye nekhredithi zinokufumaneka kubuncinci kumntu oceba uku ...
Zeziphi iintlobo ezahlukeneyo zamatyala anokukhutshwa kubhengezwe njengongenamali?
Agasti 23, 2018 UkuchithwaUshiye uluvoNguJohn Anderson
Loluphi uhlobo lwamatyala axolelwe ukubhengezwa?
Abantu bafuna ukungabinamali xa iinzame zabo zokuhlangabezana namatyala abo zisilela. Ukubhengezwa njengongenamali kuzisa indlela esemthethweni yokuphelisa amatyala akho. Oku kukuvumela ukuba ungasayi kubuyisela imali yakho ...
Ngaba iTrasti ingabhengeza ukubhengezwa njengongenamali?
Julayi 25, 2018 UkuchithwaUshiye uluvoUDerek Soltis
Ngaba kunokwenzeka ukuba iTrasti ibhengeze ukungabinamali?
Ndibuzwe lo mbuzo kwiveki ephelileyo, kwaye phantse ngayo yonke imibuzo ebuzwe ligqwetha impendulo yayingu, "Kuyaxhomekeka." Intembeko idla ngokusetyenziswa ukugqithisa ubutyebi okanye ipropathi ngokuncinci ...